Kabaha Brogue: qaababka, iskudhafka iyo waxyaabo kaloo badan! | Ragga Stylish
Kabaha Brogue: Noocyada kala duwan iyo sida loo mideeyo
Miguel Serrano | | Calzado, fashion
Iyada oo dusha sare iyo daloolkooda, kabaha Brogue kabo dhaqan ahaan loo tixgeliyo. Si kastaba ha noqotee, maalmahan waxaa loo adeegsadaa dhammaan munaasabadaha, oo ay ku jiraan shirarka ganacsiga.
Kuwa soo socdaa waa saddexda nooc ee waaweyn ee soo saarayaashu badanaa doortaan markaad sameyneyso kabaha maqaarka la jarjaray, iyo sidoo kale tilmaamo si aad uhesho iskudhaf weyn midkasta oo kamid ah:
1 Kabaha Brogue «Wingtip»
2 Kabaha brogue «Longwing»
3 Kabaha Semi-Brogue
Kabaha Brogue «Wingtip»
Ciyaaraha Fashion, € 572
Ciyaaraha Fashion, € 259
Kabaha suulasha ee kala duwanaanta - oo sidoo kale loo yaqaan 'brogues full' - waxay ku egtahay buundada cagta. Ku sharrax noocyada fiiqan ee ku habboon. Y dooro "baallooyinka" bilaa iftiin ama kabo cufan leh oo loogu talagalay muuqaalkaaga casriga ah ee casriga ah Xafiiska. Raac isla shuruucda marka aad isku dareyso jooniska.
Kabaha brogue «Longwing»
Mr Porter, 1.110 XNUMX
Officine Hal abuur
Mr Porter, 535 XNUMX
Waad aqoonsan doontaa iyaga sababtoo ah muuqaalka lugta ee la xoojiyay ee Brogues ayaa sii wadaya kabaha oo dhan. Waxay hoos ugu dhacdaa bartamaha cidhibta, halkaas oo labada dhinacba ay ku kulmaan tolmo bartamaha kaga taal. Brogue "longwings" aad ayey ugu habboon yihiin dacwadahaaga, maaddaama ay soo bandhigayaan sawir rasmi ah oo ka badan "baallooyinka".
Mr Porter, 625 XNUMX
Mr Porter, 395 XNUMX
Bogagga aad ubaahantahay si aad uhesho muuqaal rasmi ah waa Semi-brogues. Suulasha daloolkeeda ayaan u qaabeysnayn sida "W" sida kuwa kale, laakiin waa khad toosan oo fudud. Maaddaama ay leeyihiin qurxinno yar oo guud ahaan aad u dhalaalaya oo fiiqan, tani waxay ku saabsan tahay kuwa ugu fiican ee ka shaqeeya shirarka ganacsiga.
Waxaad sidoo kale ku dari kartaa iskudhafyada kale ee aad kudareyso surwaalka dharka, sida kiiska ku jira sawirka labaad, halkaas oo ay ka sameysaneyso koox leh funaanad leh turtleneck iyo jaakad gogol caadi ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Kabaha Brogue: Noocyada kala duwan iyo sida loo mideeyo